तीन टुक्रा हुँदै जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र-बाबुरामलाई सिध्याउन यस्तो छ रणनीति! « Bagmati Online
तीन टुक्रा हुँदै जनता समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र-बाबुरामलाई सिध्याउन यस्तो छ रणनीति!
काठमाडौं । संसद विघटन भएपछि मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)भित्र दुईधार देखिएको छ । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएका छन् । महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरू निर्वाचनको पक्षमा छन् । बाबुराम र उपेन्द्रको दवावमा आन्दोलन चलिरहेको छ ।
ठाकुरसहितका नेताहरू संसद पुनःस्थापनाभन्दा पनि नयाँ जनमतका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् । ठाकुरसहितका नेताहरू आन्दोलनको विपक्षमा छन् । माओवादी छाडेर विभिन्न दलबदलसहित जसपामा पुगेका बाबुरामले आफूलाई केन्द्रित गरेर राजनीति गर्न खोजेका छन् । बाबुरामका कारण जसपाभित्र सबैभन्दै ठूलो समस्या भएको छ ।उपेन्द्रले पूर्व राजपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पेल्दै आएका छन् । आफ्नो समाजवादी पार्टी निकटका नेताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गतिविधि गरेपछि जसपामा विवाद भएको छ ।
पछिल्लो उदाहरण सिहारमा भएको छ । उपेन्द्रले राजकिशोर यादवलाई रेणु यादवसहितका नेताहरूभन्दा तल राखेपछि कार्यक्रम बिथोलिने अवस्थामा पुगेको थियो । जसपाले पार्टीभित्रको फुटलाई लुकाउन सकेको छैन । जसपा कुनै पनि दिन विभाग हुने तयारीका समथ बसेको छ ।
उपेन्द्र र बाबुरामको दमनले उग्ररुप लिएको चचौ जसपाभित्र छ । जसपाबाट एउटा समूहले नयाँ पर्टी गठनको तयारीमा छ । अर्को एउटा सानो समूह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलमा जाने सम्भावना छ । एउटा समूह ओलीतिर जानेभएपछि उपेन्द्र र बाबुरामलाई ठूलो तनाब भएको छ । उनीहरूले नेताहरूलाई रोक्ने प्रयासहरू गरिरहेका छन् ।bकेही दिन अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा नेकपाका नेता महेश बस्नेतले उपेन्द्र–बाबुरामको पार्टीबाट एउटा समूह चोइटिएर आउन लागेको बताएका थिए
प्रकाशित मिति : २०७७ माघ २६ गते सोमवार